Ahoana no hahazoanao asa any Dubai amin'ny 2020 🥇 【# No.1Guide】 Fanampiana Expat!
Tale Jeneralin'ny John Smith
Na ianao manomboka mitady na vao nahitam-baovao momba ny asan'i Dubai ianao. Ary vaovao ho an'ny tsenan'ny asa any UAE ianao. Tokony ho tratranao voalohany ny orinasa lehibe indrindra. ary ny mpampiasa tsara indrindra ao Dubai dia ny Emirates.
Manome vaovao tsara foana ny Orinasa City ao Dubai. Tamin'ity indray mitoraka ity dia manome fampahalalana momba ny fandalovan'ny Emirates Cabin Crew Open day / Famakafakana + dinidinika (toro-hevitra famerenana + fanontaniana)
Mety hahitana fotoana kely ny fitadiavana asa indrindra any amin'ny United Arab Emirates. Tokony ho tadidinao fa ny olona manakarama dia miverina manodidina ny sakafo an-jatony isan'andro. Ary raha azo antoka olona izay tena miasa ao amin'ny orinasam-pifandraisana Emirates. Tsy dia fantatro loatra ianao. Ka tsy maintsy hizaha ny zava-niainanao ny CV anao izy ireo ary mazava ho azy, ny fianaranao manokana ary hahafahan'izy ireo hahalala bebe kokoa momba ny tenanao ary inona no ataonao amin'ny fiainanao.
Ka avereno antoka foana fa hanaraka ny torolàlana eto ambany isika. Satria izay tena ataontsika ho an'ny asa iray dia mitady fanampiana izahay ianao dia mahazo betsaka araka izay tratranao amin'ny resaka fikarohana any Dubai sy Abu Dhabi. Manome torohevitra sy fampahalalana vitsivitsy momba ny asa sy izahay ny fomba fitantanana ny fangatahana ho an'ny mpampiasa mety ao amin'ny United Arab Emirates ary na dia any amin'ny faritra Golfa aza.
Mba hahazoana antoka fotsiny fa ho avy ianao manana fampahalalana tsara sy feno. Manome ny fampahalalana anao izahay momba ny fomba hanaovana ny fangatahana amin'ireo Emirates amin'ny fomba mety.
Ao amin'ity horonantsary ity dia afaka mahita ohatra momba ny fomba famenoana ireo Emirates Cabin Crew Online Application amin'ny tranonkala Career (ny rohy dia: http://emiratesgroupcareers.com/engli…).
Ny fizotran'ny rindranasa dia tena manan-danja amin'ny fikarohana ataonao. Mila 100% foana ianao antoka fa ny fampiharana anao dia saika tsy misy pentina raha ny resaka ilaina amin'ny fandraisana mpiasa. Manana fisavana eto ambany amin'ny sarimihetsika YouTube. Ity lehilahy ity dia vita ho an'ny mpikaroka asa ary olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izay tsy mahay mameno ny fampiharana ny orinasam-pifandraisana Emirates. Tsotra satria sarotra tokoa ny manao izany ary misy olona sasany manampy ny olon-kafa hitantana azy ireo sy hanome ho anareo lehilahy ny mombamomba tsara ny fomba hanaovana izany amin'ny fomba mety. Ary ahafahanao mahazo ny fangatahana apetraka eo anatrehan'ireo solontena fandraisana mpiasa ao amin'ny orinasa lehibe indrindra ao amin'ny Emirates Arabo Mitambatra.
Voalohany, Manaova CV tsara
CV tanteraka, sa inona?
Mandefasa CV mitovy ve ianao, na dia mangataka toerana samihafa aza ianao? "Wholesale" mamaly ny doka dia mety mampihena ny fahombiazan'ny fikarohana ataonao. Ny fanalahidin'ny fahombiazana dia ny fifantina ny fampahalalana sy ny fampisehoana ireo zava-misy izay tena manan-danja amin'ny mpampiasa mety.
Ny fehin-kibo dia iray amin'ireo antontan-kevitra lehibe indrindra. Any Emirates, am-boalohany, io no hany antontan-taratasy izany no hamonjy ny ainao. Eny, amin'ny ankapobeny ny expats amin'ny fitenenana dia tsy miraharaha intsony ny famerenana sy ny taratasy firakotra mety. Izay no mahatonga ny orinasa City ao Dubai mametraka torolàlana momba ny fomba hahitana asa any Dubai ao amin'ny 2020 ?.
Ny valin-teninao amin'ny tolotra dia mety porofon'ny fanoloran-tena sy matihanina. Zava-dehibe ny hanaporofoanao fa mahavita ny andrasan'ny mpampiasa mety ianao any Dubai. Mandritra ny famakafakana ny dokam-barotra manam-potoana hanapa-kevitra ianao raha manana fiomanana sahaza anao ary raha toa ianao ka voky amin'ny fepetra natolotry ny mpampiasa.
Tsy maintsy tadidinao fa any UAE. Misy expat an'arivony mitady asa any Dubai na Abu Dhabi. Raha mieritreritra ianao fa ianao no mpilatsaka hofidina dia asio fampahalalana momba ny tenanao amin'ny fomba mazava sy tsara.
Ny fanalahidin'ny famoronana fialamboly matihanina dia asa fanadihadiana
Mitady manam-pahaizana manokana izahay ...
Ny orinasanay dia mitady dokotera ao Dubai
Alohan'ny hamalianao ny doka dia eritrereto raha manana fahaiza-manao tsara ianao mba haka toerana manokana. Rehefa manao ny famakafakana mety hanatsoaka hevitra ianao fa ilaina ny manomboka asa, ohatra, ho mpanampy.
Ataovy azo antoka foana fa manao fangatahana dokam-barotra mety ianao. Ohatra, mandefa ny CV anao amin'ny Mpampiasa an'arivony iza no mitady dokotera mpitsabo nify ary ny traikefa anananao dia amin'ny varotra dia tsy manampy anao mihitsy amin'ny lafiny rehetra.
andraikitra raha mitady asa ianao
Amin'ny famakafakana ny haavon'ny asa voatondro ho amin'ilay toerana dia azonao atao ny manamarina raha ho azonao izany manatanteraka tsara ny adidinao amin'ny fahaizanao sy ny fahaizanao. Raha mifanaraka amin'ny fepetra takiana ao anatin'ny fanambarana ny hetsika izay natao tao anatin'ny fanambarana, dia manana ianao vintana hihaona amin'ny asanao vaovao. Zava-dehibe ny asanao amin'ny CV anao fa manana fahalalana sy fahaizana ilaina ianao.
Farafahakeliny traikefa x-taona amin'ny toerana mitovy. Izany dia mitranga fa ny mpampiasa dia tsy manantena ny traikefa. Amin'ity toe-javatra ity dia tsara ny mifantoka amin'ny famaritana ny fampianarana sy ny fahaizana. Matetika anefa, dia zava-dehibe ny fampiharana.
Mba hanehoana fa efa nitazona andraikitra mitovy amin'ny zavatra ampiharinao ianao ankehitriny, mamaritra ny tantaran'ny asanao, amin'ny fanomezana ny lohatenin'ny asa, ny fotoan'ny asa ary ny andraikinao. Zava-dehibe ny hifaneraserana ireo atiny ireo miaraka amin'ireo asa voatondro ao amin'ny tolotra asa.
Fanabeazana ... / fahazoan-dalana ...
Mpitsabo iray, injeniera amin'ny fananganana, mpampianatra - ireo ohatra ireo ny fandraharahana mifehy, ie ireo izay azo ampiharina afa-tsy raha manana zo ianao. Eo koa ny raharaha matihanina hafa, toy ny mpiasan'ny PR, mpivarotra na programer ny mpampiasa manantena fampianarana manokana avy amin'ny mpilatsaka hofidina.
Tsy ny zava-dehibe fotsiny ny fianaranao efa vita. Ilaina ihany ny manonona ireo laminasa sy fitaizana fiofanana Nandritra izany dia nahazo sy nampivelatra ireo fahaizana ilaina ianao any am-piasana. Amin'ny maha-mpanakanto sary an-tsary, azonao atao ny manoratra, ohatra, momba ny fandaharam-pandrindrana fandaharana, toy ny Adobe Photoshop, InDesign na Corel Draw. Rehefa mangataka ny fiadanan'ny mpampiofana manokana ianao, dia hahay handalina ny fianarana ny diplaoma amin'ny sehatry ny sakafo.
Ny fahalalana ny programa ordinatera toy ny ...
Ny fanamarinana dia azo ampiasaina hanomezana fahaiza-manao rindrambaiko manokana. Ny portfolio izay mipetaka amin'ny CV anao azo ampiasaina hanamafisana ny fahaizanao.
Ny fahalalana ny fiteny vahiny eo amin'ny sehatra ...
Zava-dehibe izany mamaritra ny haavon'ny fandrosoana ianao - Mihatra amin'ny fifaninanana fiteny ihany izany fa amin'ny fahalalana ny programa informatika. Hahazo fanamafisana ny fahaizana fiteny, dia mendrika ny mandalo ny fanadinana fanamarinana. Amin'ny ampahany amin'ny fanomanana dia afaka manatrika fampianarana izay hianaranao, ohatra, ny paikadim-panadinana.
Fifandraisana, fahaizana mifehy tena amin'ny fotoana ... - fahaiza-manao malefaka Ilaina ny mitandrina izany. vokatry ny famakafakana ny CV anao, ny mpitsikilo dia nahita fa ianao, ohatra, dia mandamina. Ny fanamafisana ny fahaiza-manao toy izany angamba na ny fandaminana ny fihaonambe na mitambatra asa sy fianarana. Zava-dehibe ny manavaka ireo izay mifanaraka amin'ny kolontsaina fikambanan'ny orinasa amin'ny fahaizana malefaka anananao.
Rehefa mamorona CV, dia ilaina ny manondro fanampiny, safidy fepetra takian'ny mpampiasa. Ho fananana izay afaka manapa-kevitra fa ekena ianao hiasa.
Raha mahita ianao - Manolotra asa banga any Dubai izahay ...
Rehefa mamaky ny tapany farany amin'ilay fanambarana ianao dia manam-potoana hahita raha manampy anao hahatratra ny tanjonao ny fepetra atolotry ny mpampiasa azy. Raha mieritreritra ianao eny, dia mendrika horesahina ao amin'ny famintinana matihanina.
Ny CV voadio dia afaka manome anao ny dinidinika ary vokatr'izany dia mandray anjara amin'ny zava-misy fa ekena ianao hiasa. Tsy manan-kery ny isan'ireo CV nalefa ho valin'ny dokambarotra; ny tena zava-dehibe indrindra ny hatsarany. Fikarohana dia mahomby kokoa raha ny CV anao manokana. Rehefa mamorona tahirin-kevitra dia mendrika ny hitandrina fa tsy ny atiny fotsiny fa amin'ny endrika ihany koa: milamina sy mangarahara. Hamorona antontan-taratasy matihanina ianao mampiasa ny orinasa Dubai mpamorona CV.
Inona no valiny azo antoka hahomby amin'ny 2020?
Mamorona ary mbola concretely. Modern, fa miaraka amin'ny endrika nentim-paharazana. Tamin'ny voalohany, saingy tamin'ny fahatsorana tsotra. Mahagaga ihany fa tsy mahamenatra. Mahitsy, izay tsy midika hoe mankaleo. Manoro hevitra anao izahay ny fomba hamelomana indray ny CV anao amin'ny taom-baovao mba hahasarika ny masin'ireo mpiasa mpahazo.
Mandefa fampiharana isan'andro ianao nefa tsy misy valiny ?. Tsy fantatrao hoe inona ilay olana? Angamba tokony hijery bebe kokoa amin'ny CV anao ianao, ary raha manome azy amin'ny olona iray mba hamaky na hahafantatra tsara ny fiteny anglisy marina. Araka ny manampahaizana manokana momba ny HR, tena zava-dehibe io fomba fanao io. Matetika, ireo antontan-taratasy fangatahana dia feno fiteny, stylistic, ejaan sy typo error.
Indrindra indrindra, ny taranaka Y izao dia mifantoka amin'ny asa famoronana famoronana, saingy manadino ny fitandremana ny fitsipiky ny tsipelina diso ary manao fahadisoana fototra amin'ny fitsipi-pitenenana - hoy, John Smith, Tale Jeneralin'ny orinasa City ao Dubai
Zavatra hafa noho ny taratasy
CV iray amin'ny endrika takelaka dokambarotra, boky sary na sary mihetsika. Hevitra ato Anatiny naseho tamin'ny alàlan'ny kisary, famantarana, sary. Hamafisin'ny infographic. Ny lamaody toy izao dia efa niseho tamin'ny fampiharana. Mihabetsaka ny olona mandray ny CV-ny ho toy ny antontan-taratasy.
Tena ilaina tokoa ny fahaiza-mamorona toy izany, fa raha tsy hoe ny firavaka sy ny fomba very, dia hisy ihany koa ny fampahalalana manan-danja. Ho an'ny mpampiasa iray dia zava-dehibe ny fangaraharana, angon-drakitra manokana momba izany aiza ary rehefa nisy olona niasa, inona no nataony, inona ny adidy ananany sy ny traikefa azony.
Ny fironana amin'ny fanafoanana ny CV tsy voatery ho valiny mahasoa - hoy ny fanazavan'i John. Amin'ny heviny, hevitra mahaliana dia ny fanomanana CV ao anaty fomban-drazana ary asio rohy amin'ny tetikasa ataonao, portfolio na tranokala izay ahafahanao mahita ny fivoaran'ny sary, ohatra, toy ny komikà.
Ny manampahaizana manokana momba ny HR dia mahatsapa koa ny fiampangana amin'ny haitao ara-teknolojia. - Tsy ny mpikirakira rehetra, ohatra, dia mampiasa kaody QR sy fampiharana finday izay mamela mamaky CV. Tsara kokoa ny mitsabo azy io ho toy ny fanampiny, zavatra fanampiny ankoatra ny vahaolana fenitra - manantitrantitra an'i John Smith.
Ny fironana fampiharana
Ahoana no ahafahanao mijoro amin'ny vahoaka? Inona, ankoatra ny infographics, eny an-tampony ve?
Ny vohon-tenantsika manokana - afaka mametraka fanazavana bebe kokoa momba azy io isika raha oharina amin'ny CV iray nentim-paharazana, asehoy ny fitiavanareo sy ny fahaizanareo.
Ny kaonty amin'ireo vavahadin-tsokosoko (toy ny kaonty My Work) dia iray amin'ireo ireo toerana ireo amin'ny tranonkala izay mampifandray antsika amin'ireo tompon'andraikitra mety hitranga. Ilaina ny manavao ny antontan-taratasinao eto amin'ny taom-baovao.
Ny CV amin'ny endrika horonantsary - ity dia fomba mahaliana hanoloranao ny orinasa nofinofisinao, fa raha mahatsapa tahotra isika eo anoloan-ny fakantsary, manana olana amin'ny diksionera sy mahay isika, fitenenana maimaim-poana - aza manery ny tenanao amin'io fomba fampiharana io.
Media sosialy - notsidihin'ny loham-pianakaviana, noho izany dia mendrika ny hikarakara mombamomba ny lisitry ny matihanina. Tsy ny haino aman-jery sosialy indostria ihany mety ho manampy amin'ny fikarohana asa. Ny sasany amin'ireo tantaran'ny asany dia naseho amin'ny vavahadin-tserasera Facebook.
Famaritana ireo hetsika na tetikasa izay andraisantsika anjara, fizarana fahombiazana matihanina - Afaka misintona ny mason'ilay mpampiasa aho. Tsy misy an-tery
Ny fandinihan'ny HR's of Dubai Jobs Market dia mampiseho fa mitranga ny famoronana sy tsy fahita mahazatra amin'ny indostria isan-karazany. Azo azo isaina amin'ny alàlan'ny fangatahana toerana mitaky fahaiza-mamorona sy fahakingan-tsaina, toy ny marketing na dokambarotra manam-pahaizana manokana, manam-pahaizana manokana momba ny serivisy ho an'ny mpanjifa na ny programer application finday, izay hanolotra ny CV-ny, ohatra, amin'ny endrika kilalao solosaina na tranokala. Torak'izay ihany, ny sitrapon'ny infografika miasa amin'ny sehatra famoronana hafa.
Na izany aza, raha tsy mahatsiaro ho matanjaka izahay hiresaka momba ny traikefantsika matihanina amin'ny horonantsary na manao sary boky tantara an-tsary - avelao handeha izany ary andeha tsy hanaraka fotsiny ny fironana. - Indraindray ny resy dia kopy tsy fahatomombanana, famoronana modely iray. Ny asa tanana ratsy ihany no mirongatra ny kandida - Nandinika i John Smith.
Fa ny marina fa marina - Taratasy fa tsy CV!
Ny fananganana ravin-taratasy dia tsy voatery ho asa tsindraindray! Mety ho fomba iray izy io hitady asa any Eropa. Noporofoin'i Dawid Dąbrowski, mpandraharaha poloney iray izay nanolotra ravin-taratasy nanolotra ny tenany ho kandida amin'ny asa eo ambanin'ny biraon'ny birao.
Nanontany an'i David i Pracuj.pl raha nivadika ny hevitra ho tratra ary izy dia nahita ny nofiny.
Sarotra ny mitady fomba hitadiavana asa. Raha misy olona mitazona takelaka misy sarimihetsika mitovitovy aminy na mamorona fanehoana ao amin'ny Facebook, dia nanapa-kevitra i David ... flyers! Niasa?
Ianao mitady asa amin'ny fomba tsy manara-penitra…
Dawid Dąbrowski: Tsy fantatro raha tena tsy fenitra tanteraka ilay izy. Manana ny fahatsapana aho fa ny fomba nampiasako dia fantatra be dia be, na dia raha ny marina, ny olona mampiasa azy hitady asa dia tsy matetika hita.
Manao ahoana ny endriny?
David .: Omeko taratasy kely (hehy) fotsiny izao. Fa tsy ny ravinkazo rehetra. Naseho azy ireo tamin'ny sary matihanina aho, ankoatr'izay dia nametrahako ny antsipiriany momba ny fifandraisana ary ny kaody QR amin'ny lafiny iray amin'ny ravin-taratasy. mamerina ny mombamomba ahy, ary etsy andaniny amin'ny famerenam-be multimedia. Eny, tsy nijanona fotsiny aho, satria teo anelanelan'ny 8 sy 9: 30 ny maraina tamin'ny fidirana amin'ireo tranobe birao lehibe indrindra any Warsaw, mpiasa miasa matory amin'ny tsiky eo amin'ny molony. Nitsiky koa ny maro tamin'izy ireo, rehefa avy nandray ny takelaka.
Aiza no nahatonga ilay hevitra ho an'ity endrika ity?
David .: Te hanao zavatra toy izany aho! Mitady asa amin'ny marketing aho. Amin'ity hetsika ity dia te-haneho aho fa mamorona aho, mieritreritra hevitra, mifantoka amin'ny fanatrarana tanjona manokana sy ny fananganana fihetseham-po manokana ny hevitro. Ilay endrika dia tokony ho porofo izany Mpanonofinofy isaky ny orinasa aho. Ankoatr'izay dia tsy misy zavatra ratsy kokoa eo amin'ny fitadiavana asa toa ny tsy fanilihana sy ny fiandrasana mailaka tsy mikoriana. Te hanao zavatra famoronana aho, hiala amin'ny rindrina efatra. Tena traikefa nahafinaritra.
Na izany aza, tsy maintsy mampiasa vola toy izany ianao ...
David .: Ny takelaka dia namboarin'ny tenako, nalaina sary ireo mpaka sary mpiara-miasa amiko taorian'ny fihenam-bidy, nanao mombamomba matihanina aho ary nanao CV multimedia ihany koa aho, fa ny printy kosa efa nandrafitra ny trano fanontana. Tsy voalaza ho ambony ihany koa ny vidiny, na dia fampiasam-bola ao amin'ny PLN 1,200 aza izy io. Tsy afaka mandà aho fa ny fizotran'ny fanomanana ravin-taratasy irery nitondra ahy efa ho telo herinandro ny asa isan'andro, rehefa afaka ora vitsivitsy. Ilaina anefa ny mandany an'ity indray mitoraka ity.
Inona no vokatra azo?
David .: Mahafinaritra ny vokatra. Ankoatra ny valin-kafatra mivantana avy amin'ireo mpahazo ireo takelaka, izay tena mahomby tokoa dia nahazo e-mail marobe aho niarahaba an'io hevitra io. Zava-dehibe ho ahy izany satria raha ohatra ka mitady asa ny olona iray, mazàna izy tsy mahatsiaro tsara.
Izany no antony nanentanana. Nahazo taratasy marobe 1000 aho, nahavita nanome zato hetsy tao anatin'ny herinandro sy tapany, ary tsy nitsoaka intsony aho, satria andro vitsy taorian'ny niandohan'ny fampielezan-kevitra dia nanomboka nanasa ho an'ny dinidinika. Nisy ampolony tamin'izy ireo, ny sasany tamin'izy ireo tany amin'ireo orinasa lehibe indrindra tany Polonina.
Ahoana no nahitanao ny asa farany?
David .: Toa ho gaga ihany, nefa Nahita asa fisaorana aho noho ny orinasa City any Dubai (hehy). Na dia nahazo tolotra betsaka aza aho noho ny takelaka, tamin'ny alàlan'ny orinasa afakàn'ny Dubai no nifandraisako tamin'ny mpampiasa ahy. Izy no nanolotra ny fepetra tsara indrindra ary tsy nisalasala aho nanapa-kevitra momba ny fiasa ho an'ny orinasako ankehitriny.
Raha mila fanampiana ianao, averinao indray ve ity fanandramana ity?
David .: Hanao ny zavatra rehetra aho mba hisorohana io filana io, fa raha terena hanao izany aho dia hanao zavatra hafahafa kokoa. Tiako ny manao zavatra izay tsy ataon'ny hafa!
Inona ny torohevitra omeo an'ireo mitady asa any Eropa ve ianao ankehitriny?
David .: Raha manana aho hiatrehana zavatra iray, dia io no izy. Ataovy izay tsy ananan'ny hafa, minoa ny tenany ary raha apetraho amin'ny hafanam-po ny talentanao, ny talenta ary ny fotoana amin'ny zavatra mora indrindra iray, afaka manao betsaka ianao.
Zavatra tsy ampy amin'ny 8 izay sarotra ny mahita asa
Halatra iray Ny fahazoana asa dia mety tsy ampy na tsy mahafeno fepetra mahafeno. Miankina amin'ny toe-tsainao ny ankamaroany. Diniho ihany koa raha ny tsy fisian'ny hafatra avy amin'ireo mpandray mpiasa dia tsy vokatry ny fandefasana CV tsy miankina.
1. Fanoloran-tena kely amin'ny fikarohana asa
Ny olana amin'ny fitadiavana asa dia mety noho ny firotsahana be loatra, ohatra, ny fandefasanao ny CV anao tsy tapaka. Zava-dehibe ny manamarina ara-potoana ny tolotra omena asa, ohatra ny Bayt.com vavahadin-tserasera - ahafahana mijery ny doka misy na aiza na aiza, amin'ny fotoana rehetra. Alohan'ny handefasana CV, ho azo antoka fa vakiana ny fangatahan'ny mpampiasa sy manamboarana ny CV anao ka mifanaraka amin'ny tolotra manokana. Raha tsy ampy ny fahazoan-dàlana anao amin'ny ankamaroan'ny tolotra, izany dia fampahalalana sarobidy - tokony hifantoka amin'ny fampivelarana fahaiza-manao ianao hahita asa ao amin'ny orinasa izay mahaliana anao.
2. Fahadisoana sy hadisoana ao amin'ny CV
Mpiasa mety afaka mampatahotra ny hadisoana ao amin'ny CV anao. Azafady diniho tsara ny atiny alohan'ny andefasana ny antontan-taratasy. Aza adino fa tsy misy typos, tsipelina na stylistic lesoka.
3. Tsy misy angon-drakitra ilaina ao amin'ny CV
Ny fahasarotan'ny fitadiavana asa dia mety ihany koa ny tsy fahaizana mifandray aminao. Ny laharana finday sy ny adiresy imailaka dia tokony hampidirina ao amin'ny CV. Raha ianao adino ny momba azy, tsy mahazo mamaly ny fangatahanao ilay mpahazo mpiasa.
4. Adiresy tsy misy valiny amin'ilay rakitra
Alohan'ny handefasana ny CV anao, jereo foana fa efa niditra tamin'ny adiresy mailaka marina ianao. Angamba tsy mamaly ny fangatahana anao ny orinasa satria - ohatra, noho ny taratasy diso - tsy mbola nahazo izany antontan-taratasy tsara izany.
5. Tsy ampy ny fahaiza-manao
Halatra iray ny fitadiavana asa dia mety ho tsy fahombiazana mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fomba ofisialy. Raha mitaky fahalalana alemà ny orinasanao ary milaza anglisy fotsiny ianao dia mety holavina ny kandida anao. Alohan'ny handefasanao ny CV anao, alao antoka fa mifanaraka tsara amin'ny fanantenan'ny mpampiasa ny fahaizanao.
6. Tsy fahampian'ny traikefa / fahaizana ambony loatra
Ny fahasahiranana amin'ny fitadiavana asa dia mety ho vokatry ny tsy fahaizana matihanina na fahazoan-dàlana loatra. Raha ny mpampiasa dia mitady olona miaraka amin'ny traikefa 3 farafaharatsiny indrindra, mety tsy hanasa mpifaninana iray izy vao nahavita ny fianarany. Indraindray, sakana ny fanandramana be loatra loatra.
Ny mpampiasa iray izay mahalala fa mihoatra ny zavatra ilainy ny fahazoan-dàlana anao dia hatahotra sao dia hiala tsy miasa ianao hitady fanamby lehibe kokoa sy fahafahana matihanina.
7. Diso fitondran-tena nandritra ny tafatafa
Niasa - ny CV anao mahaliana anao ilay mpikarakara fa nanasa anao hanao dinidinika ianao. Ny vokany dia miankina amin'ny fihetsikao - raha diso ianao. ho very ny tombontsoanao miasa. Ny fahitanao, ny fahalalanao ny asan'ny orinasa sy ny tanjonao dia ilaina.
Azonao atao koa ny mangataka ny hamaha ny asa iray, koa aoka ho vonona ny hanao izany. Raha na dia eo aza ny ezaka ataonao, tsy mahazo tolotra asa ianao, dia mamintina ny tsoa-tsoa - hanampiana ny mpanafaka ny fanamarihana momba ny kandidanao. Angamba misy olona iray mihatra amin'ny toerana misy azy dia mampiseho tsara kokoa ny kolontsain'ny orinasa.
8. Tsy fahampian'ny finoana ny fahaiza-manao manokana
Raha nahaliana ny mpandray anjara ny fahaizanao sy ny fahaizanao. dia midika izany fa manana fotoana ianao haka ny toerana. Amin'ny fanehoanao ny tsy fahazoanao antoka, ny tsy fahatokisan-tena sy ny tahotra fahatahorana ho an'ny tetikasa, dia mety tsy hahita ny fotoana mety hiasanao ianao. Ho fampitomboana ny fahatokisan-tena, eritrereto ireo fahaiza-manao sy kalitao - isaorana azy ireo izany afaka mamorona ny nofinao ianao.
Ahoana ny famintinana ahy sy ny fiainanao matihanina amin'ny fomba malefaka, fa amin'ny fomba fohy?
Ny CV dia tokony ho famintinana ireo zava-bitanao teo aloha. Tsy maintsy dinihina ny filazalazana momba ny traikefa matihanina sy ny fahaiza-manao. Fepetra telo no fanalahidy: manokana, fohy sy mahitsy momba izany.
Ny singa manan-danja indrindra amin'ny CV asa momba ny asa
CV no fampirantianao. Tsy tokony ho mangarahara sy araka izay azo atao ihany, fa afaka amin'ny karazana fahadisoana rehetra - famenonam-bava, tsipelina ary stylistic ihany koa. Ireo singa manan-danja indrindra tokony hapetrakao amin'ny resinao dia efa nampiana eto ambany.
Ny CV dia tokony ahitana ny anarana sy ny anaran'ny kandidà, ary koa ny antsipiriany izay hahatonga anao hifandray aminy: laharana laharana sy adiresy imailaka. Zava-dehibe ny mampiasa adiresy mailaka matihanina.
Ny CV dia tokony ahitàna lisitr'ireo toerana efa nipetraka taloha - indrindra ireo izay manaporofo ny fahalalahan'ny indostria. Tsara homarihina fohifohy izy ireo, manonona ny fahazoan-dàlana. Ny toerana misy dia tokony aseho amin'ny filaharam-potoana mifamadika - manomboka amin'ny asa farany natao.
Famaritana ny fahaiza-manao
Ity ampahany amin'ny resume ity dia tokony ahitàna fampahalalana momba, amin'ny fahalalana hafa ny fiteny vahiny sy ny fepetra takina manokana. Ilaina ihany ny manonona ny fahaizana malefaka - indrindra ireo izany dia ho ilaina amin'ny asa mety.
Lisitr'ireo fianarana voamarina sy mari-pankasitrahana voamarina
Raha efa nandray anjara tamin'ny fampianarana sy fampiofanana fanampiny ianao dia manorata any amin'ny CV-nao. Mifantoha indrindra amin'ireo hetsika ireo izay mety ilaina amin'ny toerana mahaliana anao.
Lazao ny tanjona matihanina
Raha efa eo am-pananganana CV ianao, afaka manoratra fehezanteny vitsivitsy momba ny tanjon'ny asanao ianao. Asehoy hoe inona ny drafitra hataonao ho an'ny fampivoarana bebe kokoa, farito ny tanjonao. Misaotra an'izany dia hasehonao ny mety ho mpampiasa ho anao manana hevitra ho an'ny tenanao ary fantaro izay tianao ho tratrarina amin'ny ho avy.
Fitsipika lehibe - manavao data
Tokony havaozina hatrany ny CV-matihanina matihanina. Tokony hifanaraka amin'ny tolotra asa manokana izany, fanamafisana ny endri-javatra sy ny fahaiza-manao ilain'ny mpampiasa mety.
Ny fahamendrehana ao Dubai indrindra ambonin'ny olon-drehetra
Tsy misy fampahalalana diso azo ampidirina ao amin'ny resume. Aza manaova fahaizana izay tsy anananao. Ny lainga dia hiharihary rehefa ny fifaninanana hazavaina dia hohamarinina ianao.
Fanampiana mahasoa - Mpamorona CV an-tserasera
Mpamorona CV dia afaka manampy anao hanomana resume feno sy azo vakiana. Misaotra anao tsy hanadino ny fametrahana ireo singa manan-danja amin'ny antontan-taratasy. Ianao koa hikarakara ny lafiny maso. Aza adino fa ny CV anao no pasinao hahitana ny nofinofinao.
Ahoana ny fandehanana sy hamorona CV vao haingana?
Ny biography natolotrao amin'ny mpampiasa dia milaza betsaka momba anao. Azonao atao ny mamaky azy io raha mandinika ny antsipiriany ianao, marina ianao ary… mahay mamorona.
Ny fiverimberenan'ny manam-pahaizana manokana momba ny raharaham-barotra na ny orinasa anatiny dia mety hisarika ny saina. Jereo ny fomba ahafahanao mampiseho fahaiza-manao amin'ny fampiharana, ankoatra ny hafa, ho an'ny toeran'ny zazakely, ny mahandro na ny hairdresser.
CV mandeha sy tsara tarehy ary inona?
Infographics, famerenana amin'ny endrika horonan-tsarimihetsika - amin'ny indostria sasany dia afaka manavaka antsika ny biolojia iray miavaka. Na izany aza, tokony ho saro-pady ianao ary mandinika ity vahaolana ity dia tena mety.
Tsy ny mpifaninana rehetra no tokony hisafidy CV tsy mahazatra. Aza adino fa manan-danja kokoa noho ny endrika ny atiny. Ny matihanina izay tsy handratra na kely aza, ohatra:
Ny CV mpikaroka
Ny manam-pahaizana momba ny marketing dia heverina fa afaka manaitra ny mpanjifa. Mba handresy lahatra ny mpampiasa anao fa afaka mivarotra sy hampiroborobo ianao… mampivoatra ny tenanao. Ohatra, azonao atao ny manolotra CV amin'ny alàlan'ny sary mihetsika.
Ny fahaiza-mamorona dia singa iray lehibe ho an'ny mpamorona anatiny. Rehefa mitady asa amin'ity asa ity, tokony handeha amin'ny fandehanana fiasa miaraka amina laha-tahiry tsy mahazatra ianao. Ny antontan-taratasy dia tokony ahitana sary matihanina momba ny tetikasa vita teo aloha.
CV / mpampianatra
Mpampianatra teny vahiny ve ianao ka mitondra kilasy ho an'ny ankizy? Sa mety ianao mangataka asa amin'ny maha-mpampianatra any am-pianarana? Azonao atao ny mampiseho fomba famoronana ary, ohatra, dia manangana CV amin'ny endrika asa tanana (embroideries na decoupage).
Ny fahaiza-mamorona dia lafin-javatra lehibe iray koa ho an'ny matihanina izay nanolo-tena ho an'ny zavakanto culinary. Mba hampisehoana ny fahaizanao manan-tsaina, azonao omena CV ny sarinao miaraka amin'ny sarin'ny vilia vita amin'ny matihanina arakaraka ny fomba fanao voalohany. Azonao atao ihany koa ny manandrana manoratra tantara momba ny endriny amin'ny… mofo-mofo.
Na mety hoe mendrika ny fandefasana mpiasa mety mofomamy lehibe iray izay ahafahanao “manoratra” ny fahaizanao mampiasa ny fakana an'io tanjona io? Azonao atao ihany koa ny mamono mofomamy miaraka amin'ny gaga izay manafina ny CV anao.
Artista mpanao asa-tanana / makia CV
Ny CV misy ny mpanakanto make-up dia mety ho maro loko sy mahomby, fa miaraka amin'izay koa, mazava sy mangarahara. Ilaina ny mametaka ny rindranasa rohy mankany amin'ny portfolio, izay hahitan'ny mpampiasa azy, ohatra, ny sarimihetsika ahitanao ny fanaovana make-up.
Ny fitaovana multimedia dia azo ampifandraisina amin'ny CV anao koa rehefa miangavy ny toerana misy ny mpitsangatsangana. Azonao atao ny mamela ny sarinao amin'ny asa ao amin'ilay rakitra. Zava-dehibe ny mombamomba ny mpaka sary, izany hoe mazava tsara, voafafa, sns.
Ataovy azo antoka fa tsy voaroaka ny matihanina ny famoronana ataonao. Ny CV sarobidy dia tsy vitan'ny hoe hadino ihany koa, ary azo inoana ary misy koa fampahalalana fototra momba ny traikefa, ny fahaizana ary ny tanjona matihanina. Mamorona resume matihanina amin'ny alàlan'ny mpanao majika Pracuj.pl.
Inona no hosoratana ao amin'ny CV anao rehefa tsy manana traikefa ianao
Manoratra CV ho an'ny asa voalohany dia fanamby lehibe ho an'ny ankamaroan'ny olona. Mba hanaovana izany tsara dia mila mahita ny fotoana tony sy mampitony ny lohanao ianao: ny lahatsoratra dia hanampy anao amin'ny ambiny
Vaovao tsara ho fanombohana - ny ankamaroan'ny zavatra ilaina amin'ny famoronana resume dia ao an-dohanao. Rehefa mamorona CV ianao dia mila miditra ao amin'ireo nooks sy crannies ny fitadidianao sy eritrereto ny tenanao, ny fiainanao sy ny traikefa arak'asa ary ny tanjakao sy ny fanirianao.
Atombohy amin'ny fampianarana - Sekoly efa vita
Ao amin'ny fizarana "fanabeazana" dia mametraka fianarana tsy misy hatak'andro isika (bakalorea, tompon'andraikitra, fianarana fianarana ambony, sns) na sekoly fianarana fianarana. Afaka ampidirintsika ihany koa ny fampahalalana eto amin'ny fifanakalozana vola vahiny.
Tsy miditra amin'ny sekoly teo aloha izahay - sekoly ambaratonga ambony, sekoly ambaratonga faharoa na sekoly ambaratonga fototra. Ny sekoly ambony dia ny sekoly ambony, izay ny mombamomba azy sy ny haavony fahaiza-manao fanampiny, ohatra, sekoly ambaratonga faharoa miaraka amin'ny teny espaniola.
Fiainana ara-pitaovana amin'ny CV
Raha efa manana traikefa momba ny asa ianao dia farito ny zavatra nianaranao sy fahaiza-manao azonao. Afaka miaina traikefa momba ny fianaranao, internship ary asa tsy fanao amin'ny traikefa anananao ianao.
Na izany aza, raha efa manana traikefa bebe kokoa ianao amin'ny fianaranao na amin'ny ho avy, dia mety tsy hiditra asa hafahafa na vanim-potoana ao amin'ny CV anao. Mifantoha amin'ny mamaritra ny zava-bita matihanina teo aloha.
Ny zavatra ataonao mandritra ny fianaranao dia karazana traikefa azonao. Asongadino ny zava-bitanao ao amin'ny fizarana "Asa fanampiny".
Tanjaka sy tombontsoa amin'ny CV
Amin'ny dokam-barotra amin'ny asa dia ny fanomezana ny fahaizan'ny mombamomba ny mpifaninana no matetika omena. Karazan'olona orinasa iray nomena dia tadiavina, azonao atao koa ny manaisotra amin'ny kolontsaina sy ny filozofia, izay mamaritra ny Ny tabilaon'ny Career an'ny mpampiasa ary mivantana ao amin'ny tranokalan'ny toerana asa maro any Dubai sy Abu Dhabi.
Ny herinao sy ny firehetanao, izay mifanohitra amin'ny zavatra andrasan'ny mpampiasa, dia midira ao amin'ny fizarana misy anao ao amin'ny CV.
Rehefa avy nieritreritra ny tenanao ianao, dia tonga ny fotoana farany, izay hanomana anao hanangana CV tsara. Angony ireo zavatra ireo, mipetraha amin'ny solosaina ary ... vonona :)!
Saripika matihanina amin'ny CV
Saripika CV tsara dia mampiseho ny mpilatsaka hofidina avy eny an-tsorony, eo amin'ny lafiny malefaka ary mitsiky malefaka. Tokony hanao akanjo lobaka na bluseta malefaka sy tsy mitandahatra ho an'ny sarin'ny orinasa ianao. Aza hadino ny sary avo lenta. Raha mbola tsy manana sary ianao, dia aza manahy - afaka mandefa ny CV anao tsy misy sary. Amin'ny fanombohan'ny asanao, mendrika ny maka sary toy izany - mety hahasoa ho an'ny ho avy izy io. Azonao atao ny mampiasa ny serivisy mpaka sary na mandray anjara amin'ny fivoriana ara-barotra maimaim-poana, izay singa matetika amin'ny hetsika amin'ny mpianatra na ny fanaovana asa.
Ireo mari-pahaizana momba ny fianarana, nahazo mari-pahaizana, loka ary fahasamihafana tamin'ny CV
Angony ireo tena niforona ianao dia ho fananan'ny mpampiasa. Raha mahatadidy ny daty fiafaran'ny fizarana sy ny mpikarakara ianao dia tsy mila hikaroka ireo fiaviany. Raha tsy azo antoka ianao, dia mandehana any amin'ireo antontan-taratasy voangona.
Soraty ny daty sy ny lanjan'ny temotra momba ny fampianarana. Asongadino ireo zavatra tena misy nampivoatra anao ary nanondro ny fahaizanao azonao.
Ohatra tsara amin'ny CV iray ny anaran'ny fampiofanana, mpikarakara, daty sy lohahevitra samihafa nataonao tany amin'ny sekoly tao Dubai.
Ahoana ny fomba hahazoana ny traikefa voalohany ary hanatsara ny CV?
Inona no ifantohan'ny fialam-boly izay manokan-tena amin'ny ora maimaim-poana amin'ny fandraisana ny asa voalohany? Inona ny fifandraisana misy eo amin'ny fandraisana mpiasa amin'ny orinasa nofinofisinao sy ny asa aman-draharaha mandritra ny fialantsasatra ?.
Inona no maha zava-dehibe ny fikarakarana hetsika fanaovana asa soa, fetibe mpianatra na fihaonambe siantifika ho an'ny orinasa? Hita hoe misy izany rehetra izany mitana andraikitra lehibe! Manome lanja ireo kandidà mavitrika sy matoky ary feno angovo ny mpampiasa.
Inona avy ireo singa hodiavin'ny CV anao any Dubai?
Manana fahaizana na fahalianana tsy mahazatra ve ianao? Sa mety efa nandresy ianao loka eo amin'ny fifaninanana indostria? Rehefa mamorona CV, azafady mampahafantatra anao amin'ny mpampiasa anao mety hitranga. Ataovy azo antoka fa mifanaraka tsara amin'ny antontan-taratasy firaketana ny sarinao.
Arakaraka ny ahalalanao sy fantatrao, arakaraka ny haben'ny vintana anao hahitana ny nofinofinao. Zava-dehibe ny hahafantaranao ny fomba hanoloranao ireo hery hanananao. Mba hahatonga ny CV anao hanintona kokoa, ampidiro ireo singa toy, ohatra, izay zava-dehibe ao amin'ny UAE.
Fandraisana anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena, nahazo loka loka, fametrahana tetikasa mahaliana, miasa miaraka amin'ny manam-pahaizana manokana indrindra - manonona fanandramana toy izany, hisehoanao tenanao amin'ny maha-olona anao tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana fampandrosoana. Zava-dehibe ny fampahalalana izay nomenao dia manondro ny takian'ny mpampiasa.
Japoney, sinoa, Koreana, Czech, rosiana, Dutch: ireto no ohatra amin'ny fiteny vahiny izay tsy dia fahita loatra ny fahalalany noho ny fahaizana mampiasa, ohatra, anglisy. Ny fahalalana ny fiteny niche dia mety ho fananana lehibe sy mampitombo ny vintana amin'ny tsenan'ny asa.
Asa an-tsitrapo sy hetsika hafa ivelan'ny ora fiasana.
Mpanolo-tena ao anaty fototra ve ianao? Na mety amin'ny fotoana malalaka amin'ny tenanao, mikarakara hetsika fanatanjahantena ho an'ny ankizy ve ianao na manao ny tombotsoan'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana? Ny fanaovan-javatra toy izany dia manaporofo fa afaka miditra sy miziriziry ianao.
Tsara ihany koa raha manonona ny mahaliana izay manampy anao hampivelatra ny fahaiza-manao. Mampianatra ny fisainana lojika ny chess. Mifanentana amin'ny fianarana teny vahiny ny fitsangatsanganana. Ny fanaovana modely dia manaporofo ny faharetana, sns.
Zava-dehibe ny fanoratana ny endri-tsoratra izay hanjaka eo amin'ny fiainanao. Noho izany, hitombo kokoa ny CV. Tsara kokoa ny mametraka fonosana toy ny Courier, Comic Sans na Vivaldi. Azonao atao ny mividy, ohatra, Calibri na Arial.
Ny fametrahana sary amin'ny antontan-taratasiny dia manamora ny mpikirakira mifanerasera amin'ny zava-bita amin'ny olona manokana. Ny sary matihanina dia mety hahatonga ny antontan-taratasy tsara tarehy ihany koa. Ny sary afaka mitadidy anao ihany koa, raha ohatra, dia haseho aminy azy amin'ny T-shirt misy tenifototra: #task me.
Endrika hafa mampiavaka
Ny kisary ho an'ny CV, infographics, timeline - ny fampisehoana atiny amin'ny endrika sary sy ny tetika hanamorana ny fampahalalana mifandraika amin'izany, toy ny antsipiriany momba ny fifandraisana, ny toetra, sns. Ny sary dia afaka mahatonga ny endriny ho tsara tarehy kokoa. Mandritra izany fotoana izany, mendrika ny mahatadidy fa io atiny io, tsy endrika resy, no zava-dehibe indrindra.
Kolontsaina ao amin'ny CV
Na inona na inona loko fidinao, tokony hazava sy mangarahara ny CV anao. Ohatra, raha mangataka asa ao amin'ny indostrian'ny lamaody ianao, dia afaka mampiasa ny tatitra Pantone izay misy ireo loko mafana indrindra amin'ny vanim-potoana iray.
Ampidiro ny taratasy fanamarinana amin'ny CV anao manamafy fa manana ny fahaizanao nolazainao. Afaka atao koa ianao mametraha portfolio na rohy iray amin'ny tranokala iray misy santionany amin'ny asanao.
Famakiana ambony indrindra
Rehefa mametraka singa mamorona fanampiny ao amin'ny CV ianao, dia tandremo. Ny tantara mety ho hafahafa ary mijoro eo avy amin'ny fampiharana hafa. Tsara anefa ny manamarina fa ara-dalàna ary manamarina mazava fa ianao no mpilatsaka hofidina ho mpiantoka iray.
Ahoana ny fanoratana CV iray maoderina amin'ny karazana Emirates?
Ny aesthetic, mora azo, miaraka amin'ny fanavahana sy ny fampahalalana manokana momba ny andraikitr'izy ireo, ny haavon'ny fahaizana miteny vahiny sy ny fahaiza-manao hafa. Tokony homanina amin'ny taona vaovao ny CV.
Tsy mila mamorona famoronana ilay antontan-taratasy endrika hisintonana ny saina. Zava-dehibe ny mamaly izany indrindra amin'ireo fepetra takina amin'ny tolotra asa.
Tsy tokony haharitra ela ny CV. Hanontany vaovao amin'ny antsipirihany aho mandritra ny fivoriana fandraisana mpiasa. Raha mahita ny fampahalalana manan-danja indrindra nasongadina tamin'ny voalohany - Hitoetra tsy ho ela aho miaraka amin'ny antontan-taratasy toy izany. Mankasitraka indrindra aho rehefa misy ny CV nifanaraka tamin'ny tolotra asa napetrako tao amin'ny dokambarotra.
Azoko antoka fa miezaka mafy ny kandida ary tsy mandefa resume amin'ny ankapobeny ho an'ny tolotra, fa mijery tsara ny mpampiasa.
Mifantoka amin'ny fampandrosoana ve ianao? Traranao ve ny tanjonao? Eo am-pikarohana ny traikefa arak'asao ve ianao? Tsy sahirana amin'ny fampifanarahana amin'ny toe-javatra vaovao ve ianao? Soraty ao amin'ny CV anao ny fampiasana teny manokana.
Noho izany, dia manolotra ny tenanao ianao ary mampitombo ny fahafahanao mitombo. Zava-dehibe ny zavatra nosoratanao omen'ny ohatra, izany hoe miresaka momba ny traikefa matihanina ary manondro fa manana andraikitra sahanin'ny mpampiasa ianao.
Inona no lazain'ny CV momba ny kandidà?
Afaka mampahafantatra anao ny CV anao fa olona afaka mirotsaka, manana hevitra tsy mahazatra ary manaitra ny drafitra matihanina ianao. Milamina fa ny CV anao hanome anao fanamarinana tsara, aza hadino ny lafin-javatra fototra toy ny:
Tsy mivoaka ny lamaody mihitsy ny fanavaozana ny vaovao napetraka tao amin'ny tantaram-piainanareo. Rehefa manomboka taom-baovao dia hikarakara ny CV anao ary ampio fahaiza-manao sy fahaiza-manao vaovao vao azo. Azonao atao izany na dia tsy mikasa ny hanova ny toeranao miasa tsy ho ela aza ianao. Izany dia fomba mety hintinina ny zava-bitan'ny asanao mandritra ny taona.
Tsara raha ny anaran'ny orinasa izay niasan'ny kandidà na niasa dia manorata sombin-dahatsoratra fohy momba ny orinasa izay itahirizana ny mpampiasa, ohatra: mpamokatra orina na mpaninjara finday.
Te-hamaky ao amin'ny CV iray aho momba ny andraikitra izay ataon'ilay kandida na nilalao tamin'ny mpampiasa teo aloha ary mifanaraka amin'ny tolotra omeko ny asa. Tsy ilaina ny manoratra fa nisy olona niasa ho mpangataka 15 taona talohan'izay raha toa ka kandida mpiasan'ny teknisiana serivisy izy izao.
Fifanarahana sary sy matihanina. Te hanana fihetseham-po tsara amin'ny mpampiasa mety ve ianao? Mamorona marika manokana. Miambena amin'ny safidy matihanina ary mivoaha amin'ny lalana manokana. Ary koa, hiantoka ny firaisankina antontan-taratasy momba ny fisintonana sy loharanom-baovao hafa momba anao. Ny hevitrao dia ny CV anao, ny taratasy firakofana, ny portfolio sy ny fihetsikao mifameno.
Ny atiny manondro "fifaninana rahampitso". Afaka miara-miasa amin'ny ekipa ve ianao, maneho fihetsika mazoto ary mahavita mampiasa media vaovao? Aza hadino ny miresaka izany amin'ny CV, manoritsoritra ny zavatra niainanao sy ny zavatra nataonao teo aloha.
Ny fametrahana tabilao CV dia iray amin'ireo singa manambara indrindra. Raha mifanaraka amin'ny sarinao dia azonao atao ny mametraka sary ao anaty tahirin-kevitra na mamaritra ny traikefa amin'ny fampiasana ny fe-potoana. Zava-dehibe ny fananana fitsaboana toy izany dia tsy misy fiantraikany tsara fa eo amin'ny famakiana ny tantaram-piainana koa. - Rehefa mamaky CV dia zava-dehibe ho ahy fa ny fampahalalana manan-danja indrindra ao anatiny dia tokony hisongadina mba hampiasa fahasahiana sy tsipika.
Ny maha-marina ny CV anao any UAE
Aza mamorona sary izay tsy misy ifandraisany amin'ny zava-misy. Miezaha mamelatra ny tenanao, manatsara ny fahaizanao sy ny tenanao.
Ny CV anao ve namboarina ny andrasan'ny mpampiasa?
Ny famoronana tahirin-kevitra mahavariana sy mahomby dia afaka mitondra tombontsoa ho anao, fa amin'ny toe-javatra sasany ihany. Tadidio izany ny votoatiny sy ny lanjany ho an'ny fepetra takian'ny mpampiasa dia manan-danja kokoa noho ny endrika. Zava-dehibe ihany koa fa ny CV dia namboarina ho an'ny indostrian'asa. Raha toa ka mangataka toerana ianao ao amin'ny departemantan'ny kaonty, dia tsara kokoa ny fisorohana ny loko manjelanjelatra sy sary misy sary.
Ireo singa ireo dia ho toy ny tsy voajanahary. Tsara ny mijoro fa miaraka tsara. Raha ny asa matihanina mitaky fahaiza-mamorona mihoatra ny rehetra, ny iray dia afaka miala kely amin'ny kilasimandry ary mametraka fomba fitenenana mafy kokoa, milalao miloko na manova ny fandaharana ny atiny.
Rehefa mitady asa mitady, mendrika ny hisokatra amin'ny fitaovana maoderina sy hampiasana azy ireo. Ohatra, azonao atao ny mahita ny mety ho fisian'ny fampiharana finday Pracuj.pl, izay ahafahanao mamaly avy hatrany ilay tolotra ary manome anao fahafahana hanara-maso ny toe-javatra ny fangatahana.